Qindaa'inoota durtii tarree fi sarjaa akkasumas haalata gabatee ifteessa. Dabalaan gatii gulantaa deemsisaa fi saaga tarree fi sarjaalee ifteessa. Odeeffannoo dabalataaf gargaarsa Barreessaa Gabatee furtuu qubeetii gulaaluu in the LibreOffice ilaali.
Barruu gabateewwan haaraa uumaman hundaaf galmeelee barruu keessatti durtiilee qindeessa.
Fuula hundatti irra deebi'i
Addaan hin qoodin(HTML keessatti miti)
Gala gabatee keessaa
Gita lakkoofsaa baruu
Tottolchi kallattii badhee Walqixxeessuu tiin hin hubamu.Yoo qabiyyeewwan maadhee kallattiin jidduutti walqixxeessite,barruu yookiin lakkoofsa osoo hin jedhin jidduu ta'anii hafu.
Qabachuu gabatee furtuu
Tarree fi sarjoo gabatee cuqoo wajjin deemsisuuf qindaa'inoota durtii qindeessa.
Tarree fi sarjoo gabatee cuqoo wajjin saaguuf qindaa'inoota durtii ifteessa.
Amaloota dalgeewwan fi sarjoolee
Dhiibbaa saadhaatawaa tarree fi sarjaan ollaa tarree yookiin sarjaa irratti qaban,akkasumas gabatee guutuu irratti murteessa.